Raha olana ny vaovao tsy marina any Tonizia, tsy vahaolana ny fanamelohana( bebe kokoa) ny fitenenana · Global Voices teny Malagasy
Raha olana ny vaovao tsy marina any Tonizia, tsy vahaolana ny fanamelohana( bebe kokoa) ny fitenenana
Niparitaka ireo tsaho sy vaovao tsy marina nandritra ny fifidianana
Mpanoratra Afef Abrougui Nandika (fr) i Jean-Luc Breda, Lauren RAJAOBELINA
Voadika ny 27 Avrily 2020 6:46 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, عربي, Español, Nederlands, বাংলা, Français, English
Mpanao gazety iray sy ny ‘cameraman’-ny manao tatitra ao amin'ny birao fandatsaham-bato amin'ny andron'ny fifidianana, 13 oktobra 2019. Tamin'ny fifidianana tamin'ny taona lasa, voaloton'ny vaovao tsy marina ireo haino aman-jery sosialy. Saripikan'ny ISIE, vaomiera toniziana miandraikitra ny fifidianana, natao ho an'ny daholobe.
Taorian'ny hetsi-panoherana mahery vaika nataon'ireo olom-pirenena sy ireo vondrona miaro ny zon'olombelona, nosintonina vao haingana ilay volavolan-dalàna nampiady hevitra manameloka ny fanaparitahana amin'ny aterineto ireo vaovao “tsy marina” sy “mampisalasala” , tany Tonizia.
Nanaitra ny Toniziana ilay volavolan-dalàna niainga avy tany amin'ny solombavam-bahoaka Mabrouk Korchid, avy amin'ny antoko Tahya Tounes ( mpikambana amin'ny governemanta iaraha-mitantana ankehitriny ) ary notohanan'ireo solombavam-bahoaka hafa miisa 46, nefa mbola tena ao anatin'ny fihibohana tanteraka ry zareo noho ilay valanaretina maneran-tany COVID-19.
Sosokevitra momba ny fanitsiana [ar] ireo andininy 245 sy 247 ao amin'ny lalàna toniziana famaizana natao ho ” fisorohana ireo fanosihosena ny voninahitra sy fanimbazimbàna ny tontolo demokratika” ilay resaka. Alemaina sy Frantsa no natao ohatra tamin'ny demokrasia nanohitra ny “fake news” (vaovao tsy marina).
Na izany aza, dia nanitsakitsaka ny fiantohan'ny lalàm-panorenana ny fahalalahan'ny fanehoankevitra sy ny fenitra iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ilay andàlan-teny izay sady midadasika be no tsy mazava tsara ao amin'ilay volavolan-dalàna. Iantohan”ny andalana faha 31 ao amin'ny lalàm-panorenana [en] tonisiana ny fahalalahan'ny fanehoankevitra, ny fisainana, ny fitenenana ary ny famoahana ho hitan'ny daholobe , ary raràny kosa ireo sivana rehetra mety hatao mialoha amin'ireo fahalalahana ireo, ny andininy faha 32 kosa dia miantoka ny zo hidirana amin'ny tambajotra fahazoana vaovao sy ny serasera. Nanao sonia ny Fifanarahana Iraisam-pirenena momba ny lalàna sivily sy politika (PIDCP) ihany koa i Tonizia.
Roa taona an-tranomaizina sy lamandy 10 000 ka hatramin'ny 20 000 dinara toniziana ( eo ho eo amin'ny 3.500 ka hatramin'ny 7.000 dolara amerikana ) no sazin'ireo ” mpisera amin'ny tambajotran-tserasera sy ny vovonan'ny haino aman-jery sosialy” izay fantatra fa meloka tamin'ny fivoizana ” votoaty diso na mampisalasala”, izay no voalaza ao anatin'ilay volavolan-dalàna.
Ireo rehetra (vavy na lahy) izay mandika io fepetra io mandritra ny fotoam-pifidianana na ao anatin'ny enim-bolana mialoha izany dia hiharan'ny sazy avo roa sosona, tahaka ireo mpisera manaparitaka io karazan-dahatsoratra io ka manafina ny mombamomba azy.
Ankoatra izay, ilay fanitsiana natolotra dia hanome fahefana malalaka ny mpampanoa lalàna mba ” hanara-maso ireo heloka elektrônika sy hamantatra ireo mpanao izany”. Mandritra ny fotoam-pifidianana, ny mpampanoa lalàna dia “mandray ny fepetra fisorohana rehetra ilaina” mba hanakanana ny fanaparitahana ny votoaty toy ireny.
Ny 29 martsa, natolotra ny parlemanta ilay volavolan-dalàna natao ny 12 martsa 2020. Notakian'ireo mpanohana azy ny handinihana azy io haingana satria heverina hatao amin'ny 2021 ny fifidianam-paritra. Nefa, vantany vao nambara tamin'ny vahoaka ilay volavolan-dalàna dia notoherin'ireo olom-pirenena romotry ny hatezerana sy ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona tao amin'ny tambajotra.
Ny ampitson'ny nanolorana ilay volavolan-dalàna izay noforoniny, dia nolazain’ i Korchid ny fisintonana “vonjimaika” ilay tolodalàna noho ireo fepetra ara-pahasalamàna misy amin'izao fotoana izao.
Maro ireo solombavambahoaka hafa no nilaza fa hisintona ny soniany. Ireo hafa, toa an'i Safi Said, solombavambahoaka tsy miankina dia nanamafy fa tsy nitovy tamin'ilay notohanany ilay volavolan-dalàna naseho farany.
Miady amin'ny vaovao tsy marina, “tsy asiana fitsaràna an-tendro” ny fahalalahana maneho hevitra
Tahaka ireo hafa maneran-tany, dia tsy isalasalàna fa olana lehibe ny fandisoam-baovao any Tonizia. Niharihary nandritra ireo fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka tamin'ny taona lasa ireo ahiahy mikasika ny fiantraikan'ireo votoaty tahaka ireny amin'ny fizotry ny fifidianana sy ny demokrasia marefon'ny firenena. Nandritra ny fotoam-pifidianana, heniky ny tsaho politika tsy marim-pototra sy vaovao tsy marina ireo tambajotra sosialy, indrindra fa ny Facebook.
Na efa vita aza ny fifidianana, dia mbola mihanaka ihany ireo tsaho, ny firenena anefa niady tamin'ny fiparitahan'ny COVID-19 izay efa nahavoa olona 628 sy nahafaty 24 ny 7 Aprily. Izany dia nanery ny ministeran'ny Fahasalamana hamoaka fanambaràna, tamin'ny 29 Martsa, nampitandrina fa izay rehetra “manaparitaka tsaho sy vaovao lainga” dia hiharan'ny fanenjehana, izany no atao dia mba hiarovana ny fahasalamam-bahoaka. .
Fa raha tanjona ara-drariny ny ady amin'ny vaovao tsy marina, dia famerana be ireo zon'ireo mpisera amin'ny fitenenana an-kalalahana sy am-pahatoniana ny heviny ary ny fidirana amin'ny fanomezam-baovao ny fandraràna ny fitenenana imasom-bahoaka. Vokany, ary mety ho loza mananotanona ny fandrosoana demokratika ao Tonizia vita tanatin'ny taona vitsy taorian'ny nionganan'ny fitondran'i Ben Ali tamin'ny 2011.
tao anaty fanambaràna an-tsoratra iray navoaka ny 30 Martsa, nampitandrina ireo vondron'ny fiarahamonim-pirenena miisa 24 ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ireo vondrona mpiaro ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, isan'izany ny ligy toniziana miaro ny zon'olombelona (LTDH) sy ny Sendika jeneralin'ny mpiasa toniziana, ny Fikambanana toniziana miaro ny fahalalahan'ny tsirairay ary ny sendika nasionalin'ny mpanao gazety toniziana (SNJT) :
ولئن كان التصدي للأخبار الزائفة أمرا مشروعا، إلا أنه لا يجب أن يتحول إلى مطية لضرب الفصلين 31 و32 من الدستور التونسي عبر استعمال عبارات فضفاضة كالتي وردت في المقترح
Raha ohatra ka ara-drariny ny ady amin'ny vaovao tsy marina, dia tsy tokony hiova ho fanitsakitsahana ny andininy faha 31 sy 32 ao amin'ny lalàm-panorenana toniziana izany amin'ny alàlan'ny fampiasàna teny tsy mazava tsara tahaka izay hita ao amin'ilay volavolan-dalàna.
Etsy andaniny, ny fahefana tsy miankina mamndrindra ny serasera amin'ny haino aman-jerin'ny firenena ( HAICA ), dia niantso fifanatonan'ireo mpiara-misehatra mba hiadiana amin'ireo hadisoana sy fanomezana vaovao tsy marina :
موضوع الأخبار الزائفة يجب أن يطرح في إطار حوار واسع يجمع كافة المتدخلين من مختصين وهياكل مهنية ومؤسسات إعلامية ومكونات مجتمع مدني لإيجاد الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة دون المساس من جوهر الحق في حرية التعبير في تناسق تام مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور التونسي
Tokony ho dihihana eo amin'ny sehatry ny fifanakalozan-kevitra malalaka ivondronan'ireo mpandray anjara rehetra, na izany manam-pahaizana manokana, na anaty rafitra matihanina, ireo fikambanan'ny haino aman-jery sy ny fiarahamonim-pirenena, ity trangana vaovao tsy marina ity mba hitadiavana vahaolana nefa tsy hanohintohina ny zo amin'ny fahalalahana maneho hevitra, mifanaraka tsara amin'izay takian'ny andininy faha-49 ao amin'ny lalàm-panorenana toniziana.
Voalazan'ny andininy faha 49 [pdf ] fa ny fandraràna ny zo sy ny fahalalahana iantohan'ny lalàm-panorenana dia ” tsy tokony ekena raha tsy ilaina amin'ny Fanjakàna sivily sy demokratika”, ary mametra azy ireny ho amin'ny filàna ara-dalàna, toy ny hoe fiarovana ny zon'ny hafa, ny fepetra takian'ny filaminam-bahoaka na ny fahasalamam-bahoaka, sns …” raha toa ka misy ny fifandanjàna eo amin'ireny fandraràna ireny sy ny tanjona tadiavina”
Fotoana fohy ihany tokoa ity ezaka natao farany hamerana ireo zo amin'ny fahalalahan'ny fanehoankevitra sy fanomezam-baovao an-tserasera ity. Na izany aza, tsy niala ilay fandrahonana. Noho izany, nampatsiahivin'i Korchid fa ” vonjimaika ihany” ny fisintonana ilay volavolan-dalàna ary nambarany fa ” resy lahatra izy” hoe tsy mahakasika ireo fahalalahana izany, Araka izany dia tena azo antoka tokoa ny hanandraman'ireo mpanao lalàna ny handaniana azy io indray, na amin'izao firafitry ny teny izao na firafitra hafa.
Ankoatra izany, na efa nahavitra fandrosoana mendrika aza i Tonizia nanomboka tamin'ny 2011 raha zon'olombelona no resahana, dia mbola misy ireo lalàna hafa izay mbola mandràra hatrany ny fahalalahan'ny fanehoankevitra sy tsy manaja ireo fenitra iraisam-pirenena.
Ny andininy faha 86 amin'ny fehezandalàna mifehy ny fifandraisan-davitra dia milaza fa izay rehetra meloka amin'ny ” fanelingelenana na manakotaba ny fiainan'ny hafa amin'ny alàlan'ny karazan-tserasera rehetra ” dia ho voasazy hatramin'ny roa taona an-tranomaizina. Ny Lalàna famaizana dia ahitàna ireo fepetra izay manameloka ny fanalàm-baraka sy fanaparitahana votoaty ” mety hanakorontana ny filaminam-bahoaka na ireo fitondrantena tsara”.
Tokony hiezaka hanova sy hanafoana ireo fandraràna voalaza tany aloha ny parlemanta toniziana fa tsy hanameloka ny fandraisam-pitenenana am-pahibemaso. Ireo fepetra manamafy ny fangaraharan'ny governemanta sy manamafy ny fitokisan'ny olom-pirenena ny andrim-panjakany ihany – ary tontolo iray eken'ny haino aman-jery sy ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety – no afaka miady amin'ny fanomezam-baovao tsy marina nefa tsy manitsakitsaka ireo zo sy fahalalahana fototra.
Nandika (fr) i Jean-Luc Breda